Murugo: Maanso Uu Guddoomiye Xasan Maxamed Yuusuf Ugu Baroor-diiqay Marxuum Gaarriye
Wednesday June, 16 2021 - 11:27:33
Tuesday February 18, 2014 - 08:54:05 in by Super Admin
Maansadan Murugo waxa curiyay Abwaan, Suxufi, dhaqan-yaqaan Xasan Maxamed Yuusuf oo uu dhalay fannaankii caanka ahaa ee Maxamed Yuusuf Cabdi
Maansadan Murugo waxa curiyay Abwaan, Suxufi, dhaqan-yaqaan Xasan Maxamed Yuusuf oo uu dhalay fannaankii caanka ahaa ee Maxamed Yuusuf Cabdi Alle ha u naxariisto’e. Xasan waxa uu ku dhashay degmada Maxamuud Haybe ee magaalada Hargeysa 18/Ogos/1968-kii, tacliinta malcaamadda waxa uu ka bilaabay Madrasadda Al-najaax oo loo yaqaanno Inji. Waxbarashada Dugsiga hoose waxa uu ku qaatay Qudhac-dheer intii u dhaxaysay 1975-1978-kii. Iskuulka dhexe-na waxa uu ka dhigtay Guryasmo amin ku siman 1978-kii illaa 1982-kii.
Sannadkii 1982-kii ayuu ku biiray aqoonta Dugsiga Sare-na ka bartay Maxamuud Axmed Cali. Intaas kaddib waxa uu Oktoober/1985-kii ka mid noqday Weriyeyaasha Idaacadda Hargeysa, markuu halkaas laba gu’ joogayna waxa uu u wareegay idaacadda Muqdisho. 1988-kii waxa uu ka mid noqday bahweyntii aasaastay Idaacaddii SNM: Codkii Dhaqdhaqaaqa Waddaniga Soomaaliyeed, oo uu madaxa barnaamijyada ka ahaa.
Waxa uu markii Somaliland la soo laabatay xornimadeeda ka shaqeeyay xarumo saxaafadeed badan oo uu madaxa barnaamijmada iyo wararka ama tifatire ka noqday ka noqday sida Radio Hargeysa, Somaliland Space Channel, Horn Cable TV, Wargeyska Hargeysa Star, ESTN.
Laga bilaabo Feb/2007-da illaa Abril/2008-da waxa uu ahaa Madaxa Idaacadda VOA laanteeda Somaliland, isagoo ahaa masuulkii xafiiska VOA ka furay Hargeysa. Hadda waa Guddoomiye-ha Ururka Suxufiyiinta Somaliland ee SOLJA oo uu ka mid ahaa aasaayaashii salka u dhigay. Waa suxufi ku xeel-dheer faaqidaadda, xifdiga taariikhda iyo suugaanta Soomaalida iyo caalamka kaleba. Waxa uu ku nool yahay caasimadda Somaliland.
Xasan Maxamed Yuusuf waxa uu maansadan Murugo ugu baroor-diiqayaa Eebbe ha u naxariisto’e Abwaan, Halgamaa, Bare-sare Maxamed Xaashi Dhamac "Gaarriye” oo macallin u ahaa, saaxiib dhowna ay ahaayeen.
Waa tan maansadi:
Tix ku maararraw iyo
Maan jeclayn Batuunoow
Mid inaan ka tiriyee
Alla hagane haydaa
Igu dhalisay maantoo
Moos baygu ciiroo
Anigoo is moog baan
Aan ku muusannaabee
Marinkuu lahaan jirey
Xasanow miyaan helay?
Mise wuu marooraa?
Kala maarmi karin iyo,
Muran soo dhex gala iyo,
Megli laysu ramiyiyo
Rasaas laysku madhiyiyo
Ooddiyo muskays xiga
Mahuraan ku wada nool
Colaadaha dhex mara iyo
Magac xumada ceebta leh
Marna kaan jeclaynee
Isagoo madluun ka ah
Murti aan hadhayn iyo
Madmadow ku jirinee
Mareeg-diid inuu yahay
Aan midiidin Noqon karin
Moogganaa u sheegee
Xalaal-maal "jir” yidhiyee
Miliqsade ka nixiyee
Malafsade "dhac” yidhiyoow.
Runta lagama maarmee
Mur hadday ka adagtahay
Kaan ka maagi jirinoow.
Milge beeshay gobannimo,
Maalooti xoog lihi
Ka duween majarahee
Mindi lagu qadhaabtiyo
Maqaarsaarka loo rogay,
Macaan jeceshi ururtiyo
Kolkay tuugtu Maaleen
Ee maatadii iyo
Maxastii ku noolayd
"Moqorraysta” lagu yidhi
Kolkay taladu Murugtee
Loo maaro waayee
Sharaf iyo murwaad go’ay,
"Ama waa la muuqdaa
Ama waa la maqanyee”
Milaygaa wixii jirey
Ninki mooggan yeelkee
Kii maasha nabarkiyo
Meesha eelku jiifiyo
Intuu dooxay mililkii
Maansadii sidii daad
Dalka wada mushaaxdiyo
Haddii ay mug leedahay
Kii loo milaaloow,
Madhax aan idlaaneyn
Midho aan dhammaaneyn
Maax aan gudheyn iyo
Magac baad ka hoyatee
Inta mudan intaw mudan
Kii lagu mannaystoow.
Aad la magac ahayd iyo
Hakaa dhigo maciisoo
Haku mariyo geestay
"Aniguna Insha allah Waan Isa Soo Sharaxi Doonaa"Maxamed Waji
09/06/2021 - 17:29:09
"Waxaad na saarteen Masiirkiinii Gabileynimo waan ku shaqayn doonaa" Xil, Eng Cabdikariim Maxamed.
06/06/2021 - 18:11:22
Taliye Mahad"Gaarigii Cabdi biliha ee la socday Xasan Sheekh ayaa xabada bilaabay"
03/06/2021 - 11:58:43
Gudaha:-Wasiir Maxamed Kaahin Oo Sabootiyey Goob-joogayaashii Caalamiga ahaa+Arimaha Laga Wada Hadlay.
02/06/2021 - 17:22:16
Mucaaradka oo dhaliilay Ra'isulwasaare Maxamed Xuseen Rooble
17/05/2021 - 16:47:54
Wasiirka Maxamed kaahin oo dalka dib ugu soo laabtay Kana War Bixiyey Xaladiisa Caafimad
17/05/2021 - 14:08:10